Search မြန်မာဇာတ်ကားသစ်များ 2022 - GenFK.com
နိုင်ငံကြီးသား ၊ မြန်မာဇာတ်ကားသစ်များ
တရုတ် ခရစ်ယာန်ဖြစ်သူ ကျင်းရီ နှင့် သူ၏ ညီမသည် သူတို့၏ ဘုရားသခင်အပေါ် ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် စည်ပင်သာယာရေး လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် ဝန်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ သူတို့ ဖခင်၏ ခိုင်မာသော တားဆီးပိတ်ပင်မှုနှင့် အကျပ်ကိုင်မှုတို့ကို ရင်ဆိုင်ကြရသည်။ ဤအရာက မိသားစုအတွင်း ပြင်းထန်သော ဝိညာဉ်ရေးရာ တိုက်ပွဲတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေလေသည်။ ကျင်းရီနှင့် သူ့ညီမတို့သည် စီစီပီ အစိုးရ၏ အလိမ်အညာများ နှင့် ကောလဟလများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ချေပဖို့ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် အရူးအမူး ဒေါသထွက်ပြီး သူတို့ ဖခင်သည် သူ၏ အရာရှိ ရာထူးကို ထိန်းသိမ်းဖို့ရန်အလို့ငှာ သူ၏ သား၊ သမီး နှင့် ဇနီးသည်တို့ကို အိမ်မှ သနားအကြင်နာမဲ့စွာ နှင်ထုတ်လေသည်...။ ဤမောင်နှမသည် ခရစ်တော်နောက်လိုက်ဖို့ ပြတ်သားစွာ ရွေးချယ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဧဝံဂေလိတရားကို သူတို့ ဆက်လက် ဖြန့်ဝေကြလေသည်။
3 Feb · 1.4K views
Mainova IRONMAN EUROPEAN CHAMPIONSHIP Pro Race (Part 2)
Back to the action for the Mainova IRONMAN EUROPEAN CHAMPIONSHIP Pro Race. Our athletes are getting close to completing the bike and beginning their marathon. Stay with us to see who will first to break the tape!
Faith Centre Sunday Morning Family Worship - June 26th 2022
Faith Centre Sunday Morning Family Worship - June 26th 2022 Be interactive with us LIKE and COMMENT, Follow us on all social media platforms. Facebook Instagram & TikTok. Subscribe to our YouTube @ Faithcentre TV
Faith Centre Trinidad
慶祝888阿貝出關🔥🔥🔥 老闆賠錢 給大家福利 買到撞到🔥🔥🔥 應粉絲要求~加開精彩回放! 給你們史上破盤價 應粉絲要求~加開精彩回放!
秀炮兒 Show Power